Ukugubungela i-Oregon Mass Shooting inika ithemba kubazali abaphulukene nonyana kwi-Aurora Rampage - Usnews
Amakhaya Kunye Nemakeovers
Amakhaya Osaziwayo Kunye Nezindlu Ezidumileyo
Amathala Eencwadi + Iiofisi
2011 Ikhitshi Yonyaka
Usuku Lokubhiyozela Ootata
Iiholide + Imibhiyozo
Ukugubungela i-Oregon Mass Shooting inika ithemba kubazali abaphulukene nonyana kwi-Aurora Rampage
eRoseburg, eOregon Ithunyelwe ngo-Okthobha 4, 2015, 10:04 pm UJohn Locher/AP
Kwiiyure ezinesiphithiphithi emva kokudutyulwa kweKholeji yoLuntu yase-Umpqua e-Oregon, amagama kunye nobuso bandanda kwi-intanethi ngoochwephesha abangabafundisi kunye nabaphangi besithi bachonge umpu.
Ngosuku olulandelayo, uDouglas County Sheriff uJohn Hanlin uxelele iintatheli ukuba umvavanyi wezonyango, hayi yena, kungekudala uza kukhupha isazisi esisemthethweni somdubuli-uChris Harper-Mercer oneminyaka engama-26 ubudala.
Andizukuchaza igama lalowo udubulayo, utshilo unothimba. Andizumnika udumo ngesi senzo sibi sobugwala.
Isityebi sePedroncelli / AP
Yayilixesha elazisa ithemba kuCaren kunye noTom Teves, unyana wakhe u-Alex wasweleka ekhusela intombi yakhe kwimbubhiso ka-2012 kwindawo yemiboniso bhanyabhanya yaseAurora, eColorado. Ukusukela ngoko, abakwaTeves basebenzele ukugcina ilifa lonyana wabo liphila ngelixa bekhuthaza ukuba umbulali wakhe alityalwe.
Siqala ukwenza impembelelo, utshilo uTom Teves. Yintoni embi? Akukho nto imbi ngaphandle kokuba abantu baphile.
Baqala ooTeves Akukho kwaziwa , umngeni kumajelo eendaba ukuba abe noxanduva xa enika ingxelo ngokudutyulwa kwabantu abaninzi. Kwakhuthazwa ngokukhawuleza emva kokudubula kwe-Aurora - njengoko i-Teves ikhangele ulwazi malunga nento eyenzekayo ku-Alex, yonke into ababeyibona bubuso bompu.
Xa ubugorha bonyana wam bungahoywanga kwaye endaweni yegwala elambulalayo, longeza nje intlungu, utshilo uCaren Teves.
Uyilo lwangoku lwekhitshi lwamaplanga
Ngosuku olulandelayo, njengoko babemi kwindawo yokupaka kwindawo yemidlalo yeqonga, uTom Teves wanikela umngeni kuAnderson Cooper weCNN. Yiya imizuzwana engama-60 ngaphandle kokuchaza igama lakhe. Okanye iiyure ezingama-24. Okanye ngonaphakade.
UBrennan Linsley / AP
UTom kunye noCaren Teves bathetha namalungu eendaba ngelixa bephethe isikipa esinemifanekiso yabalishumi elinesibini ababulawa kwi-Aurora movie theatre shooting ngoJulayi.
Umceli mngeni wazalwa ngenxa yokuzama ukusinda ngokweemvakalelo, utshilo uCaren Teves. Esi sibini ke saqala ukuphanda ngokudubula kwabantu abaninzi kunye nezizathu ezisemva kwabo.
Inyani ibuyile ngokungathandabuzekiyo ukuba ludumo kunye nodumo, utshilo uTom Teves.
Ngokukhawuleza emva kokudutyulwa kwabantu abaninzi, injongo enye ayifane icace. Iingcali ziye zalatha kwizinto ezifana ubuntu benarcissistic , iminqweno yokuziphindezela kuluntu, kunye ukungabi naluvelwano . Kwiimeko ezininzi - kuquka i-Umpqua Community College - umdubuli wafunda ezinye izidubulo ezininzi.
Iba liphulo lokuthengisa lomdubuli olandelayo, kwaye abantu bafanele ukuphila, utshilo uTeves.
Iindaba zeBuzzFeed zipapashe igama likaMercer kunye nefoto njengenxalenye yokugubungela.
Ebhekisa kwiividiyo zegraphic zokunqunyulwa kwentloko yi-ISIS, uMhleli oLawulayo uShani Hilton uye ngaphambili kuxoxwe ngesimo senkampani ekuxeleni umxholo ofumaneka lula kwi-intanethi.
“Asifuni kungcolisa i-Intanethi, utshilo. Kukho kwi-intanethi, abaphulaphuli bethu bakwi-intanethi, ngoko ukuzenza ngathi kukho udonga oluthile phakathi kwabaphulaphuli bethu kunye nomxholo oluhlaza, kubonakala ngathi bubudenge kum.
Nangona uTom Teves ebhekisa kwindoda eyadubula unyana wayo njengegwala okanye yona, uthe uyaqonda ukuba abeendaba banomsebenzi ekufuneka bewenzile. Wenza, nangona kunjalo, ucela abeendaba ukuba babe noxanduva: Xela ibali njengoko ubuya kwenza, kodwa chaza umdubuli kube kanye kuphela ukuba kukho imfuneko kwaye uyeke ukuqhubeka ebonisa iifoto ezifanayo.
Oko kuyakumsusa umntu odumileyo kuloo mntu, utshilo.
Njengoko iKholeji yoLuntu yase-Umpqua iqala ukuvela ezindabeni kwiveki ephelileyo, uthe wabona amabali amaninzi ngamaxhoba, iziganeko ngokwazo, kunye nendawo yekholeji eluntwini.
Umsinga uqalisa ukujika, utshilo. 'Ayithathi isenzo seCongress, ithatha isenzo sesazela.
ERoseburg, indawo encinci apho phantse wonke umntu wayenxulunyaniswe nale ntlekele ngandlel’ ithile, abahlali bathi baxhalabele amaxhoba, abasindileyo, kunye neentsapho zabo. I-hashtag ethi #dontsayhisname yaqala ukusasazeka ngokukhawuleza, kwaye abaninzi bafuna ukugxila kumabali obugorha aqala ukuvela nge #coverthecourage.
Umphambukeli ogityiselwe ngamatye @shesmokesdankyo
Wonke umntu uthetha ngokudutyulwa, ndisesibhedlele ndizama ukubona umhlobo wam okwimeko emaxongo. #dontsayhisname #NdimUCC
iikowuti ezikhuthazayo zokubulela
03:43 PM - 02 Oct 2015
Kumthandazo womlindelo kufutshane neRoseburg ngoMgqibelo, isithethi siye saphinda ikhwelo lokuyeka ukusebenzisa igama lalowo udubulayo. Kodwa ayinguye wonke umntu okhwele eRoseburg.
U-PJ ​​Jackson, obezimase umlindo nomhlobo wakhe, ucebise ukuba ukubalisa ibali likaHarper-Mercer kunokuzisa uphuculo kwinkqubo yempilo yengqondo yesizwe, mhlawumbi kuthintelwe intlekele yexesha elizayo.
Oko kufuneka kulungiswe, utshilo.
UTreven wadutyulwa, wopha, waza wasebenzisa umzimba wakhe ukugquma umzimba kaLacey. Yintoni iqhawe
12:41 AM - 04 Oct 2015
Njengoko umlo wemfazwe malunga nokunika ingxelo kunye nokuzukiswa uqhubeka, iintsapho zamaxhoba zijongene nexesha elide, kwaye zinokuba nesithukuthezi, kwindlela engaphambili, utshilo uTeveses. Intlungu iyatya kwaye ayinguye wonke umntu ekuhlaleni oya kuchaphazeleka ngokunzulu.
Njengoko ixesha lihamba, abantu baya kudinwa yinto yokuba usentlungwini kwaye bafuna ukuba udlule kuyo, utshilo uTom Teves. Uya kuphulukana nabahlobo.
Ke umlo wabo weNotoriety - ukuthintela ukudubula okuzayo - uyaqhubeka, njengoko kwenza umsebenzi wabo wokugcina inkumbulo ka-Alex ephila, ukuze aqinisekise ukuba umntu oneminyaka engama-24 ubudala owayesandula ukufumana iinkosi zakhe kwizengqondo, owayefundisa ulutsha olunenkathazo, owafa esindisa umntu amthandayo, uphumeza kwaye ukhuphe uphawu ngexesha elishiywe ngumbulali wakhe.
Ekuphela kwento esiyifunayo kukuba abantu bakhumbule umntwana wethu, utshilo uCaren Teves.
Imeko eyoyikisayo: Abaphenduli bokuqala base-Oregon bachaza iNdyikityha, ukuPhilisa
Ukudubula kwiKholeji yaseOregon kukhupha intshukumo yemidiya yoluntu kwinkxaso yamaKristu
I-Rightmove ityhila i-10 yeeDolophu zoLwandle zase-UK ukuba zihlale kuzo
Ukukhula okukhawulezayo kwemifuno - Imifuno esi-7 yokuKhula kunye nokuVuna ngokukhawuleza
Iingcebiso ezili-15 eziphezulu zekhaya elicocekileyo
26 Imibono yokuCwangciswa kwetafile yokuBulela-Ukuhombisa iTafile yokuBonga
Abantu kwi-Mosque yaseMinnesota eyayiqhushumbisiwe balinde uTrump ukuba athethe nesenzo sobunqolobi
U-Huma Abedin Uqala ngeNdlela yePhulo kunye no-Anthony Weiner
Ukuhombisa ngentlonelo ngeNdawo yokuhombisa yaseMelika
I-Aeropostale, i-PacSun, i-Disney, kunye nezinye ziphelisa ukuCwangciswa kweeFowuni
UTom Steyer Uhamba Ngaphaya Kwemozulu
UJames Holmes wayesempilweni ngexesha lokudutyulwa kwethiyetha yeAurora, ugqirha wengqondo uthi
Indlu yasemaphandleni eyayisakuba yiPosi eyayithengiswa eSurrey
Ukunyamekelwa komthi kaFicus: Yintoni ekufuneka uyazi
Ifanitshala ye-Bois Bois: Bukela uDiane Husson Wenza ifanitshala enje ngomthi kwiKhonkrithi
uyilo lokulala lolutsha
igumbi lokuhlala imibono yokuhombisa
imibono yokupeyinta kwigumbi lokulala lamakhwenkwe
caphula ngosuku loomama